Posted by သဲုးဝဝ်ဝဝ် at 5:06 AM0comments Links to this post
Posted by သဲုးဝဝ်ဝဝ် at 7:33 AM0comments Links to this post
Posted by သဲုးဝဝ်ဝဝ် at 5:27 AM0comments Links to this post
အခုချိန်မှာ ငါတို့အမျိုးသားကို ထိပါးစော်ကားလာတဲ့ မြေပေါ်မြေအောက် ရန်သူမှန်သမျှကို ငါတို့တော်လှန်ရမယ် ငါတို့ရဲ့ အသက်တွေ သွေးတွေနဲ့လဲရမယ် ငါတို့ရဲ့သွေးတွေမြေမှာစီးကျပါစေ ငါတို့ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး မင်းတို့တွေမှာတာဝန်ရှိတယ် လို့ သီချင်းမစခင်မှာ မိန့်ခွန်းချွေ သွားတဲ့ ဗိုလ်ချစ်သူရဲ့ စကားလေးတွေကို ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး၊
ငါတို့ကရင် အမျိုးသားကို ထိပါးစော်ကားလာတဲ့ ရန်သူမှန်သမျှကို တွန်းလှန်ကာကွယ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုသွားတဲ့ ဗိုလ်ချစ်သူကို ငါ့ညီအကို တို့ရေ C box မှာ လာအားပေးကြပါဦး။
Posted by ဒေါနမြေမှ အညတရ ခရီးသည် at 5:52 AM 1 comments Links to this post
နေဇော်နိုင် ရဲ့ ကျနော်ဆွဲဖွင့်မိသောတံခါးများ (အပိုင်း ၁-၂-)
အင်မတန်မှပဲ ထိမိပြီး ကောင်းတဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေပါခင်ဗျား… နားထောင်ဖြစ်အောင်နားထောင်လိုက်ကြအုံး
Posted by သဲုးဝဝ်ဝဝ် at 8:41 AM0comments Links to this post
၂။သက္ကရာဇ် (၁၀၁) ခုတွင် သရေခေတ္တရာပြည်ကြီး တည်ထောင်၏။
၃။ကမ်းယံတို့ မဖြို၊ ဆက်လက်ရေတွက်၏။
၄။ကမ်းယံတို့ မဖြို၊ ဆက်လက်ရေတွက်၏။
၅။ ယခု ကမ်းယံသက္ကရာဇ်….
၁။ ဗုဒ္ဓဂေါတမ ပရိနိဗ္ဗာန်စံယူသည့်နှစ်ကစ၏။
၂။ သက္ကရာဇ် (၁၀၁)ခုတွင် သရေခေတ္တရာပြည်ကြီး တည်ထောင်၏။
၃။ သက္ကရာဇ် (၆၂၄) ခုတွင် သုမုန္ဒရီမင်း၊ (၆၂၂) ခု ဖြို၏။ (၂) ခုကြွင်းထား၏။
၄။ ဖြိုသက္ကရာဇ် (၅၆၄) တွင် ပုဂံ ပုပ္ပါးစောရဟန်း ( ၆၅၂ ) ကို ဖြို၏။ (၂) ခု အကြွင်းထား၏။
၅။ ယခု ကောဇာသက္ကရာဇ် ဖြိုသက္ကရာဇ် ၁၃၄၂ -ခု ဖြစ်၏။
ထူးကြီး ဝေဠုဝန်ဆရာတော် ဦးထေရိန္ဒာမှာ ပရိယတ္တိ၊ ဘာသန္တရ၊ ဒေသန္တရ ပြောင်မြောက်အောင် တတ်တဲ့ ကရင်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်၏။´ကမ်းယံဟာ ကရင်ပဲကွ၊ ကရင်အစ အင်းမက ´တဲ့။ ရှေးကမ်းယံလို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးကို အင်းမအရပ်က ပြည်မြို့တောင်ဘက်မှာရှိ၏) စတင်ပြီး ကရင်လို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်တယ်။ ကမ်းယံသက္ကရာဇ်ဟာ ကရင် သက္ကရာဇ်ပဲ မှတ်ထားပါ´ ဟု မိန့်ကြား၏။ ထိုအခါ ဆရာတော်ကြီးသည် ကရင်ဖြစ်၍ တော်ပေသေးသည်ဟု မိတ်ဆွေအချို့နှင့်တကွ အထင်မှားမိ၏။ ယခုမူကား ကမ်းယံတို့ ကရင်ဖြစ်ကြောင်း သံသယမရှိ။ အကြောင်းမူကား….`ရှေးအခါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသော လူမျိုးသုံးမျိုးအနက် ကမ်းယံ ဟုခေါ်သော လူမျိုးအမည်မှာ ကရင် ဟူသောအမည်သို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်လာသော အမည်ဖြစ်သည်`ဟု ဆာအာသာဖယ်ရာက တင်ပြခဲ့သည်။(စာမျက်နှာ-၁၀) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနုိုင်ငံရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ကရင်၊ (Sir Arthur Phayer Translations of Ehnological Society Vo1.V).
၁၉၆၁-ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရှေးဟောင်းကမ္ပည်းကျောက်စာ သုတေသန အစီရင်ခံစာတွင် ကရင်လူမျိုးများအား မြန်မာ့သမိုင်း၌ ဖော်ပြခဲ့ကြသော ကမ်းယံလူမျိုးများနှင့်လည်းကောင်း၊ ယူနန်နယ်ရှိ ယောင်နှင့် မြောင်လူမျိုးများနှင့်လည်းကောင်း မျိုးနွယ်ဆက်သွယ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။(စာမျက်နှာ-၁၆) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ၊ ကရင်)၊
၁၉၃၇-ခုနှစ်၊ ကရင်သက္ကရာဇ်အကြောင်း ဆွေးနွေးသောအခါ စာမျက်နှာ ၁၀-၁၆ အကိုးအကားကို မသိရသေးသဖြင့် ကရင်ဆရာတော်ကြီး ဦးထေရိန္ဒအား ထင်မြင်မှု ပေါ့ခဲ့သည်။ ထို့အတွက် လက်ဆယ်ဖြာ ဦးထိပ်၍ ကန်တော့ပါ၏။
ထိုစဉ်က အကိုးအကားနှစ်ခုကို သိခဲ့ပါမူ မိတ်ဆွေ အမတ်(၁၂) ယောက်တို့ ကမ်းယံသက္ကရာဇ် ဟု ဆုံးဖြတ်မည်ကို သံသယရှိစရာ မလိုပါ။ဤကား ရှေးသက္ကရာဇ်ရှိခဲ့ကြောင်းပါ။
တရုတ်ပြည်အနောက်ပိုင်းရှိ ကြီးမားသော တောင်တန်းကြီးများ ၀န်းရံလျက်ရှိသည့် ကုန်းပြင်မြင့် ငွေတောင်ပြည်မှ ကရင်တို့ ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြ၏။´ ထီ့ဆဲမဲ့ယွာ`ဟု ခေါ်သည့် သဲမြစ်ကြီးကို ဖြတ်ကူးပြီး တဖြည်းဖြည်း ယူနန်ပြည်သို့ ဆိုက်ရောက်လာကြ၏။ထိုယူနန်ပြည်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ကြသည်။ ပထမအသုတ် အချို့ကရင်များ ယူနန်ပြည်မှ BC ခမ (၁၁၂၈)တွင် ရွှေ့ပြောင်းလာ၏။ တပန်၊ မြစ်ငယ်၊ ဧရာဝတီအတိုင်း စုန်ဆင်း၏။ အချို့ သံလွင်မြစ်အတိုင်း စုန်ဆင်း၏။ ဗမာပြည်သို့ BC ခမ (၁၁၂၅) တွင် ရောက်၏။ ဒုတိယအသုတ် BC ခမ (၇၄၁) တွင် ယူနန်ပြည်မှ ထွက်ခဲ့၏။ BC ခမ (၇၃၉) တွင် ဗမာပြည်သို့ ဆိုက်ရောက်၏။( သုတေသီ ဆရာဦးအောင်လှ၊ ပါဠိဆရာကြီး ဦးစော၊ ဦးကျော်ဇံ(ကသာ)၊ ဦးဖိုးတုတ်(ပညာအုပ်)၊
ပထမအသုတ် ကရင်များ ဗမာပြည်သို့ ရောက်သောအခါ လယ်ယာစိုက်ပျိုးကြ၏။ နှစ်အတော်ကြာသော် မှန်မှန် စိုက်ပျိုးနိုင်၏။ အခြေအနေ ကောင်းမွန်လာ၏။ ထိုအခါ ၀မ်းသာအားရဖြင့် ကောက်ဦးစားပွဲကို ကျင်းပကြ၏။ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယအကြိမ် စသည့်ဖြင့်ရေတွက်ရာမှ ကောက်ဦးစားပွဲသက္ကရာဇ်ပေါ်လာ၏။ ဒုတိယအသုတ် ထိုနည်းတူ လယ်ယာစိုက်ပျိုး၏။ ကောက်ဦးစားပွဲကျင်းပပြီး သက္ကရာဇ်ပေါ်လာ၏။ ပထမအသုတ်မှာ ရှေ့ကဖြစ်၍ ပင်လယ်နှင့်နီးသော အရပ်သို့တိုင်အောင် ချီတက်ကြ၏။ ဒုတိယအသုတ်မှာ နောက်မှဖြစ်၍ ပင်လယ်နှင့် အနည်းငယ်လှမ်းသော နေရာများတွင် နေထိုင်ကြ၏။ ထိုခေတ်က ကူးလူးဆက်ဆံသွားလာရေး မလွယ်ကူသော ကာလဖြစ်၍ သက္ကရာဇ်မတူကြ၊ နှစ်မျိုးဖြစ်နေ၏။
ငယ်စဉ်က ပဲခူးနယ်တောင်ပိုင်း လယ်သမားများက ပြာသို လဆန်း(၁) ရက်နေ့တွင် ကောက်ဦးစားပွဲ ပြုလုပ်ကြ၏။ နံနက်စောစောတွင် အဘိုးတို့၊ ဘကြီးတို့၊ သူတို့၏ မိတ်ဆွေရွှေင်ကျင်မှ ပြောင်းလာသူ ရွှေပွင့်ဝါ(ထူးဖောပေါ) တို့နှင့် နှစ်သစ်ကူးအကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးကြ၏။ အားပါးတရ စိတ်အားထက်သန်စွာ ပြောကြ၏။ သက္ကရာဇ်အကြောင်းလည်း ပါလာ၏။ ပဲခူးတောင်ပိုင်း သက္ကရာဇ်မှာ ရွှေကျင်မှ ပါလာသော သက္ကရာဇ်ထက် (၃၁၀) ကြီးတယ်လို့ ကြားဖူးသည်။၁၉၃၇-ခုနှစ် ကရင်ပြဿနာပေါ်ပေါက်လာသောအခါ ဘကြီးများ၏ သက္ကရာဇ်မှာ ၂၇၉၉-ခု ရှိနေ၏။ (၂၈၀၀) ပြည့်ရန် တစ်နှစ်လိုသောကြောင့် မှတ်မိ၏။ ရွှေကျင်သက္ကရာဇ်က (၃၁၀) နှစ် ငယ်နေ၏။ ၎င်းကို စောဂျွန်တင်ဒီဖိုးမင်းအားပြောပြရာ `ဟုတ်တယ်`၊ တို့ တောင်ငူ သက္ကရာဇ်နဲ့ တူတယ်´ ဟုဆို၏။
သက္ကရာဇ်အတွက် ကရင်အမတ် (၁၂) ယောက် စည်းဝေးပွဲလုပ်ရာ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ၊ နှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဤအတွက် ဖြေရှင်းဖို့ လိုလေသည်။သာဓက မှာ Pictured Encyclopedia၊ ခရစ်တော်လွန်ပြီး နောက် အနှစ် (၂၀၀) အတွင်း ခရစ်တော်မွေးနေ့ မေလ၊ ဧပြီလ၊ ဇန်န၀ါရီလ ဟူ၍ ကွဲပြားနေသည်။ အေဒီ (၃၀) လောက်မှာ ဒီဇင်ဘာ (၂၅) ရက်အတွင်း ကျင်းပ၏။အများသဘောတူညီချက်အရ ဒီဇင်ဘာလ(၂၅) ရက်နေ့ကို ယခုတိုင် ဆက်လက်ကျင်းပကြ၏။ စွယ်စုံကျမ်းက ခရစ်တော်မွေးနေ့သည် ဒီဇင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အကြောင်းပြ၏။သို့သော် အကြီးအကဲများက သဘောတူဆုံးဖြတ်၍ အားလုံးရိုသေလေးစားစွာ လိုက်နာ၍ ကျင်းပကြ၏။
(Pictured Encyclopedia: We know that this could hardly have happened in December because it rains almost continuously at the time of the year in Palestine and shepherds would not keep their flock out on the hills at night in such weather.)
ခရစ်မမတ် ကမ္ဘာ့သာဓကကို ယူ၍ တောင်ပိုင်းကရင် သက္ကရာဇ်နှင့် မြောက်ပိုင်း ကရင်သက္ကရာဇ်ကို ဖြေရှင်း၏။တောင်ပိုင်း သက္ကရာဇ်မှာ ဘီစီ (၇၃၉) နောက်မှစ၏။ ဘက်မလိုက်ဘဲ ကြားခံပြီး ဘီစီ (၇၃၉) မှစ၍ ကရင်သက္ကရာဇ်ကို ရေတွက်ဖို့စဉ်းစား၏။ အမတ်တစ်ဦးက `တို့သက္ကရာဇ်ကို ပြင်နိုင်မလား `ဟု ဆို၏။သုမုန္ဒရီမင်း၊ ပုပ္ပါးစောရဟန်းမင်း၊ ခရစ္စမတ်လူကြီးများ၊ အများကောင်းကျိုးအတွက် ဖြူစင်သော စိတ်ထားဖြင့် ပြုပြင်ခဲ့၏။
တို့ အမတ် (၁၂) ဦးကလည်း ကရင်လူမျိုးများကို ကိုယ်စားပြုသူများဖြစ်၍ ဤသက္ကရာဇ် နှစ်ခုကို ကြားချေနိုင်သည်ဟု တညီတညွတ်တည်း ယူဆကာ အားလုံး VETO အာဏာသုံးမှုကြောင့် ယခု ကရင်သက္ကရာဇ်ကို ဘီစီ (၇၃၉) မှစ၍ ရေတွက်ကြသည်။ထို့ကြောင့် ရှင်းပြချက်မပါလျှင် ဗဟုသုတ ရှိသူများက ဘီစီ (၇၃၉) ကို ကရင်သမိုင်းမှတ်တိုင် တစ်ခု ဟူ၍သာ လက်ခံနိုင်၏။ ကရင်သက္ကရာဇ် စသည့်နှစ် ဟု လက်မခံနိုင်ချေ။ သက္ကရာဇ်ဂုဏ်သိက္ခာလည်း မရှိ။ဗဟုသုတရှင်များ၏ ယူဆချက်ကိုလည်း အပြစ်မဆိုနိုင်ပေ။ ကမ်းယံသက္ကရာဇ်၊ ကရင်သက္ကရာဇ်(၂၅၂၂)၊ ကောက်ဦးပွဲစား ကရင်သက္ကရာဇ် (၂၇၂၀) ဖြစ်ကြောင်း ဗဟုသုတရှင်များ သံသယမရှိစေရန် ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
ကရင်သက္ကရာဇ် ရောင်ဝါနေသို့ ထွန်းစေသော်…
`ယုတ္တာ ယုတ္တိ ဆင်ခြင်ညှိသော်၊ ၀ီစိကိစ္စာ၊ မရှိရာတည့်။(ရှိဖွယ်ရာတည့်) ထုံးရာဇ၀င် သက်သေတင်၍ ဆင်ခြင်နှောင့်နှေးကာလဝေးခဲ့….။နှစ်ပေါင်း (၃၀၀၀) မျှ ကိစ္စ။
(ဆရာကြီး စောမြတ်သိန်း၏ စာမူမှ ကောက်နုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
၂၇၄၉-ခုနှစ်၊ သထုံမြိနယ်၊ ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်စာစောင်မှ ပြန်လည်ရိုက်နှိပ် ဖော်ပြပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ စာတင်သူအနေနဲ့ ကရင်သက္ကရာဇ်အကြောင်းကို သိစေချင်တာပါ။ကရင်သက္ကရာဇ်က စာတင်သူအနေနဲ့လည်း အရင်က ရှာဖွေဖတ်ရှုခဲ့ပါတယ်။သို့သော် အကြောင်းအရာကောင်းတွေ ရှာရခက်ပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးမှာလည်း ကရင်သက္ကရာဇ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ ဗဟုသုတတိုးလိမ့်မယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်
Posted by သဲုးဝဝ်ဝဝ် at 7:01 PM0comments Links to this post
Posted by သဲုးဝဝ်ဝဝ် at 9:19 AM 1 comments Links to this post